Khiyaamadii Maraykanku Kula Kacay Daalibaan: Dhammaanba Qalabkii Milatari Ma Shaqanayaan | Foore News
Home Warar Khiyaamadii Maraykanku Kula Kacay Daalibaan: Dhammaanba Qalabkii Milatari Ma Shaqanayaan
Khiyaamadii Maraykanku Kula Kacay Daalibaan: Dhammaanba Qalabkii Milatari Ma Shaqanayaan
Kabul, September 2, 2021- (Foore)- Waxaa soo baxay sawirro muujinaya dagaalyahannada Taalibaan oo wata qalab milateri oo ay ciidammada Mareykanka kaga tageen garoonka diyaaradaha Kabul ee Hamid Karzai. Guud ahaan waa 73 diyaaradood, ku dhawaad ​​100 gaari iyo qalab kale oo ay ciidamada Maraykanka ka tageen markii ay ka baxeen Afghanistan waqtigii loo qabtay ee 31 Ogosto. Laakiin madaxa taliska dhexe ee Mareykanka Gen Kenneth McKenzie ayaa sheegay in dhammaan qalabkaasi laga dhigay kuwa aan la isticmaali karin. “Diyaaradahaas ma ahan kuwa dib dambe u duuli doona,” ayuu yidhi. Sida ay xigteen wakaaladaha wararka qaarkood , saraakiisha Taalibaan ayaa walaac ka muujiyay in agabka iyo hubka ciidan ee uu Maraykanka ka tagay aysan ahayn kuwa shaqaynaya. Diyaaradaha looga tagay Kaabul waxaa ka mid ah:
Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee MD-530, oo loo adeegsado sahanka iyo weerarka dhow
A-29 oo ah diyaaradaha weerarka fudud loo isticmaalo.
43 MD-530s, oo ay bixisay Maraykanka.
27 baabuurta milatariga dhulka gaar ahaan kuwa nooca la yirahdo Humvee.
Tiro aan la cayimin oo ah qalabka difaaca gantaalaha iyo madaafiicda.
Yaa hubka iyo lacagta siiya Taalibaan?
Dowr caynkee ah ayuu Mareykanku ka ciyaaray asaaskii Taalibaan?
Waxayna khubaradu tilmaamayaan in diyaaradaha qaarkood laga yaabo inay aad ugu xaddidan yihiin Taalibaan sababtoo ah ma haystaan duuliyeyaal tababaran, iyo sidoo kale u helidda dayactirkooda. Balse, in kasta oo aysan suurtogal ahayn in la sheego tirada saxda ah, haddana inta badan 167 diyaaradood, oo ay ku jiraan 33 helicopter oo ah nooca UH-60 Black Hawk, oo ay gacanta ku hayeen ciidamada qalabka sida ee Afghanistan dhammaadkii Juun, ayaa hadda loo malaynayaa inay ku jiraan gacanta Taaliban.
Previous articleMaxaa Ka Hir-Galay Heshiiskii Somaliland La Gashay Imaaraadka Carabta Ee Madaarka Berbera, Waa Maxay Sababta Wax Looga Badelay?!
Next articleXisbiga WADDANI Oo Iclaamiyey Wakhtiga Uu Qabsoomayo Shirweynihiisii Guud